कलाकार भन्छन्– रविको निष्पक्ष छानविन होला जस्तो हामीलाई लागेन्
कर्पोरेट नेपाल , ७ भाद्र २०७६, शनिबार, ०४:४६ pm
काठमाडौं । नाम चलेका कलाकारहरुले प्रहरी हिरासतमा रहेका टिभी प्रस्तोता रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणको निश्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्ललवमा उनीहरुले लामिछानेको रिहाई गर्न पनि माग रे ।
हाँस्यकलाकार, अभिनेता तथा फिल्म निर्माता दीपकराज गिरीले रवि लामिछाने आइतबार रिहाई गरियोस भन्ने आफ्नो कामना रहेको बताए । उनले भने, ‘अब रविजीको बारेमा बोल्दाखेरि, मैले मेरो मुहारपुस्तिकामा पनि लेखेको थिएँ, पछिल्लो कारण आयो, त्यसमा बोल्न चाहन्छु । त्यस्तै पीडाबाट म पनि गुज्रिरहेको व्यक्ति हुँ । आत्महत्या गर्नेप्रति मेरो समवेदना छ । चलचित्र प्रदर्शनको सिलसिलामा एक जना भाई यही पीडाबाट गुज्रिनुपर्यो । त्यो पीडा मैले नजिकबाट आत्मसात गरेको छु । संसार एउटा महाभारत हो । हरेक प्रकारका युद्धको सामना गर्नुपर्छ । अन्याय हुन्छ भने कानूनको ढोका ढकढकाउनुपर्छ । जीवनको नाम संघर्ष हो ।’
गिरीले रवि लामिछानेको लागि यति धेरै समर्थन रहेको पनि सुनाए । उनले भने, ‘उहाँको पक्षमा ठूलो समर्थन छ । चासो छ । अहिले हामीले कानून संशोधन गरेका छौं । म त कानूनमै दोष देख्छु । आक्षेप लगाउने मान्छे १०० प्रतिशत सत्य हुँदैन् । कानून सुधार गर्नुपर्छ । यदि कोही मान्छेले म त मर्छु र अरुलाई पनि दुःख दिन्छु भन्यो भने धेरै मान्छे कष्टडीमा हुन्छन् ।’
उनले आफू र रवि लामिछानेबीच निकै लामो मित्रता रहेको सुनाए । गिरीले भने, ‘मित्रताको कारणले म यहाँ आएको होईन । म सत्यको पक्षमा बोलुँ भनेर सधैं कोशिस गर्छु । रवि निर्दोष छ । म यहाँ क्लबमा आउँदै गर्दा सडकमा रविलाई रिहाई गर भनेर अहिले पनि जाम छ । रविजीले सामान्य मानिसको आवाज उठाईदिनुभयो । त्यसैले आज न्याय पाउनुपर्छ । भोलि नजिर बस्न सक्छ, जिन्दगीबाट हारेको मान्छेले आरोप लगाएर मरिदिनसक्छ । यत्रो प्रेसर दिँदाखेरि त रविजी दश दिन बसिसक्नुभयो । कसैले कसैलाई अन्याय गरेको छ भने रविजीलाई भेट्नुपर्छ भन्ने अवस्था छ । आम मानिसले अहिले चलचित्रमा हामीले देखाउने नायक र नायकत्व रविजीमा पाउनु भएको थियो ।’
गिरीले आत्महत्या भनेको आफैंमा अपराध भएको सुनाए । ‘यो केशमा भोलि न्याय हुनेछ । रविजीले भोलि न्याय पाउनुहुन्छ ।’ – उनले थपे । उनले कानूनमै सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिए । गिरीले भने, ‘राज्यले रविजीलाई न्याय दिनेछ । रिहाई भएर जनताको आवाज लिएर फेरि आफ्नो कर्ममा फर्किनुहुन्छ । राज्यले पनि गम्भिर विचार गर्नुपर्छ । जनताको नायकलाई जबरजस्ती खलनायक बनाउने काम गर्नुभएन ।’
तर, उनले भीडले न्याय नदिने कुरामा आफू विश्वस्त रहेको सुनाए । यद्यपी उनले हिजो राजाको शासनको पालामा भीडले परिवर्तन ल्याएको कुरा बिर्सन नहुने सम्झाए । गिरीले भने, ‘तर, कारणसहितको भीड हुनुपर्छ ।’
अर्का कलाकार निखिल उप्रेतीले विशुद्ध नेपाली झण्डामुनि बसेर सत्य बोल्ने मान्छेले नेपालमा दुःख पाउने सुनाए । उनले पछिल्लो समय मानवता खत्तम भएको र सत्य भन्ने चीज हराएको सुनाए ।
उप्रेतीले भने, ‘हामी सत्यको पक्षमा लडौं ।’ देश र जनताप्रति राजनीतिक गर्ने व्यक्तिहरु इमानदार हुनुपर्ने उनको भनाई छ । तर, शक्तिकेन्द्रित भएपछि मान्छे नशामा केन्द्रित हुने उप्रेतीले प्रष्ट्याए ।
उनले थपे, ‘रविजी त पपुलर हुनुहुन्थ्यो । आफ्नो आवाज प्रष्ट भनिरहेका छन् । कानूनको व्याख्या नै गलत छन् भने कानूनले कसरी काम गर्छ ? नेपाली झण्डाको मुनि बसेर काम गरौं । रविजीलाई मात्रै होईन, यहाँ स्वतन्त्र रुपमा सत्यको पक्षमा लड्नेमाथि यो अवस्था सिर्जना गरिन्छ । क्राईम गरेको व्यक्तिलाई डर हुन्छ । हामीले लड्नुपर्ने यसको विरोधमा हो । हामी रविजीको पक्षमा एकजुट हौं । धेरै विश्लेषण नगरौं ।’
उप्रेतीले नेपालमा सही व्यक्ति र पार्टीको रंग नलागेको व्यक्तिलाई अप्ठ्यारो अवस्था रहेको सुनाए । उनले भने, ‘रविजीको हकमा कानूनले सही तरिकाले निर्णय होस् । सत्य, तथ्य कुरा जनताकहाँ पुगोस् । हामीले रविजीलाई साथ दिनुपर्छ । तर, यो केशमा राजनीतिकरण नहोस् ।’
अर्का कलाकार रमेश उप्रेतीले रवि लामिछाने पक्राउ प्रकरणमा छिटोभन्दा छिटो छानबिन हुनुपर्ने माग गरे । उनले भने, ‘म रविजीको साथी हो । छिटोभन्दा छिटो छानबिन होस् । निश्पक्ष होस । बिना कुनै दबाब काम गर्न दिईयोस् । यो देशमा अदालत छ । श्रीमान हुनुहुन्छ । यो केश कोर्टमा गैसक्यो । प्रेसर दिएर राम्रो निर्णय ल्याउँदैन् ।’
उप्रेतीले रवि लामिछाने स–सम्मान छुट्नुहोस भनेर प्रार्थना गर्न आग्रह गरे । तर, यो प्रकरणमा दोषी भए रविले पनि सजाय पाउनुपर्ने उनको भनाई । उप्रेतीले थपे, ‘उहाँ पनि कानूनभन्दा माथि हुनुहुन्न ।’ यद्यपी उनले हिरासतभन्दा बाहिर राखेरपनि रवि लामिछानेमाथि छानबिन गर्न सकिनेमा त्यसो नगरिएको भन्दै आपत्ति जनाए ।
उप्रेतीले भने, ‘उहाँलाई भयंकर अपराधीजस्तै गरेर पक्राउ गरियो । उहाँले त सुरुवातदेखि नै प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गर्छु भन्नुभएको थियो । तर, जे होस अब अन्तिम निर्णय अदालतको हो । रविजी भनेको आवाजविहीनको आवाज हो । उहाँले आफ्नो आवाजलाई निरन्तरता दिनुहोस् ।’
कलाकार निर्मल शर्मा ‘गैंडा’ले पनि रवि लामिछाने निर्दोष रहेको भन्दै आइतबार रिहाई हुने विश्वस लिए । त्यस्तै अर्का कलाकार अनुराग कुँवरले रवि लामिछानेले न्याय पाउनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘रविजी निर्दोष हुनुहुन्छ । उहाँले न्याय पाउनुपर्छ ।’
रविन्द्रलाई सम्झिदै युवा नेताहरुले भने– हामीले विकासप्रेमी, निष्कलंकित, मिलनसार…
‘लगानी सम्मेलन आवश्यक हो, तर सरकारले जति तयारी र छलफल गर्नुपर्ने हो, गरेन्’
‘लयर्स एकेडेमिक एक्ट’ ल्याउँछुः श्रेष्ठ, ‘जुडिसिएल ट्रेन्ड एनालाइसिस’को सुरूवात…
केन्द्रको निकै आलोचना गर्दै आएका राउत अहिले भन्छन्– सम्बन्ध राम्रो भइसक्यो
‘सरकार जस्तो चरित्रको छ, त्यस्तै छ नीति तथा कार्यक्रमः प्रचारमुखी र खोक्रो’
मोटरसाइकल र कारमा घर जान नपाइने, सरकारले आफैं गाडी व्यवस्था गरिदिने
अहोरात्र खटिइरहेका स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको तलवभत्ता नकाट्न पूर्वराजाको सल्लाह
साँसदलाई १० अर्ब दिएर जथाभावी खर्च गर्नुभन्दा कोरोना नियन्त्रणमा उपयोग गरौंः विज्ञ
सुलभ अग्रवाललाई छुटाउन मैले दवाव दिएको छैनः उद्योग राज्यमन्त्री दुगड
एनएमबि बैंकले बागमती प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्यो १०० थान पीपीई
सनराइज बैंकले अनलाइन माध्यमबाट सार्वजनिक गर्यो वि.सं २०७७ सालको क्यालेन्डर
कोरोना उपचार कोषमा नेशनल लाइफले प्रदान गर्यो रु. ५१ लाख
महामारीविरुद्ध खटिँदा मृत्यु भए परिवारलाई रु ५० लाख, ४ महिनाको व्याज प्रदेश सरकारले तिरिदिने